कुटपिट गर्ने ज्ञानेन्द्र शाही अस्पतालमा, काम गरेर खाने मजदुर जेलमा ! – मिलिजुली खबर
कुटपिट गर्ने ज्ञानेन्द्र शाही अस्पतालमा, काम गरेर खाने मजदुर जेलमा !
in अपराध, गृहपृष्ठ, समाज
आफुलाई स्वघोषित सामाजिक अभियन्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाहीको टोलीमाथि भौतिक आक्रमण गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाका आफन्तहरूले तत्काल रि हाइको माग गरेका छन् । आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेत अगाडि वि रोध प्र दर्शन गर्दै बिना सर्त रि हाइको माग गरेका हुन् ।
पक्राउ परेकाकी आफन्त मिना सलामी मगर भन्छिन्, केपी ओली त के आफ्नो नगरपालिकाको मेयरको नाम थाहा नभएकालाई केपीको भरौटे भन्दै कुप्रचार गरिएको छ । ‘उनीहरू मदिराले लठ्ठीएका थिए, हामी दिनभर मजदुर गरेर खानेलाई किन कसको भरौटे भने कु प्रचार गरियो ?
केपी ओली को हो हामीलाई के मतलब ? दिनभरि काम गरेर खाने मजदुरलाई बिना गल्ती प्रहरीले थुनेको छ । उल्टै कुटपिट गर्ने ज्ञानेन्द्र शाहीलाई अस्पतालमा राखेको छ ।’ मिना सलामी मगरले भनिन् ।’
‘बिहान ८ बजे खाना खाएर काममा गएका श्रीमानसहित गाउँका अन्य युवा मोटरसाइकलमा वीरेन्द्रनगरबाट घर जाने क्रममा करेखोलामा जम्काभेट भएछ ’, उनले भनिन ।
‘उताबाट आएको ज्ञानेन्द्र शाहीको टोली रक्सीले एकदमै मात्तिएको थियो । हाम्रो पक्षका युवाहरूले बाटो साइड माग्दा उताबाट उल्टै ढुङ्गाले हानेपछि बल्ल दुई पक्षबीच झडप भएको हो ।’
वीरेन्द्रनगर १३ कै यमबहादुर पुन मगर भन्छन्, ‘निषेधाज्ञाको समयमा राहत वितरण गर्ने नाममा जे पायो त्यही गर्न पाइँदैन ।
उहाँहरूले त्यो दिन त्यहाँ गएर राहत वितरण हैन । उल्टै रक्सीले मातिएर गाउँका युवाहरूलाई कुट्नु भएको छ । केही युट्युबमा राखिएको भिडियोमा ज्ञानेन्द्र शाहीले सस्तो लोकप्रियताका लागि झुट बोलेका छन् ।’
यसका साथै उनीहरूले ज्ञानेन्द्र शाही वि रुद्ध नाराबाजी समेत गरेका छन् । स्थानीयहरूले एक केजी चामल समेत नपाएको बताईएका छन् । तर युट्युबेहरू भने करोडौँको राहत वितरण गर्ने ज्ञानेन्द्र साहिको टोली माथी स्थानीय कुटपिट गरेको भन्दै सामग्री प्रशारण गरेका थिए ।
ज्ञानेन्द्र शाही र उनकाे टाेली माथि जेठ २८ गते राति कुटपिट भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले वीरेन्द्रनगर-१३ का पाँच जना युवाहरूलाई पक्राउ गरेको छ ।
ज्ञानेन्द्र शाहिको टोलीले आफुहरूमाथी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समर्थक युवाहरू हातपात गरेको समेत आरोप लगाएका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहि समाज सेवाको नाममा जहिल्यै सेलिब्रेटी भन्छ खोज्छन् ।
उनकै कुरा बेचेर खाने केहि युट्युबेहरूले अनावश्यक हल्ला फैलाउने गरेको छ । ज्ञानेन्द्र शाहि काम भन्दा बढी प्रचारमा रमाउँछन् । र देश विदेशबाट उठाएको पैसामा रमाईलो गर्दै हिँड्छन् ।
काभ्रे स्वास्थ्य चौकी इन्चार्ज शाहीद्वारा घर्तिछापको आईसोलेसनलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग